Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Hoteelka caalamiga ah ayaa dalbanaya dagaallo kor u kaca oo leh kharashyo tartan ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Socdaalayaashu waxay dib ugu soo noqdaan diyaarado ama waxay ku garaacaan wadada nasasho wanaagsan oo looga baahan yahay monotony-guri-guri iyo Netflix xad dhaaf ah.
Bishii Juun 25, 2021, 2,137,584 qof ayaa soo maray garoomada diyaaradaha ee Mareykanka, sida ay sheegtay TSA.
Dalka Mareykanka, halkaasoo dowlado iyo degmooyin badan ay sii dabcinayaan borotokoollada COVID, dakhliga hoteelku wuxuu sii waday socodkiisii ​​bishii May.
Huteelada Yurub way ka dambeeyaan gobollo kale maadaama dalal badan ay sii wadaan shaqaalaynta xeerarka hortaagan soo noqoshada safarka.
Iyada oo aafada guud ee adduunka ay ka muuqato calaamado muujinaya tanaasul, warshadaha hudheelka wadajirka ah ayaa guranaya abaalmarinta, maaddaama safarradu dib ugu soo laabtaan diyaaradaha ama ay wadada u galaan nasasho si wanaagsan loogu baahan yahay oo ka timaadda monotony-ka guriga iyo culeyska xad dhaafka ah ee Netflix. Warshadaha hudheelku way ku faraxsan yihiin inay dib u soo dhoweeyaan iyaga, laakiin dakhliga oo yaraaday oo sii socda - waxsoosaarka qaybo ka mid ah oo aan weli ku soo laaban si xamaasad leh, sida shirkadaha iyo kooxduba - oo ay kaabayaan qarash gareynta iyo suuqa shaqada oo aad u dhib badan, ayaa leh cawaaqib khadka hoose.
Bishii Juun 25, 2021, 2,137,584 qof ayaa soo maray garoomada diyaaradaha Mareykanka, sida laga soo xigtay TSA, tiradaas oo 78% ka ahayd wadarta guud 25-kii Juun 2019, iyo 237% ka badan tahay Juun 25, 2020. Dadku mar kale way socdaan, taas oo waxay ka dhigan tahay inay hoteellada mar kale deggan yihiin.
In ka USA, halkaasoo gobollo iyo degmooyin badan ay kusii nasanayaan borotokoolka COVID, dakhliga ayaa sii waday socodkiisa bishii Maajo, iyadoo RevPAR ay kor u kacday 539% isla waqtigaas sanad ka hor, laakiin weli 51% way ka hooseysaa Maajo 2019. Iyada oo dakhliga qolalku ay kuxirantahay qeybta nasashada , Wadarta dakhliga ayaa soo raacay, illaa $ 127 qol kasta oo la heli karo, 541% ayaa kordhay isla waqtigaas sanad ka hor.
Kharashaadka shaqaaluhu waa ku dhowaad $ 20 qol kasta oo la heli karo illaa bishii May ee la soo dhaafay, kharashka sii wadi doona inuu sii kordho maaddaama milkiilayaasha hoteellada ay ogaadeen inay qasab ku sii badinayaan ayna ku daraan dhiirrigelin si ay u soo jiitaan shaqaalaha kuwaas oo weli ka biyo diidsan inay ku laabtaan shaqooyinka martigelinta ama beddelay xirfadda waddooyinka.
Waxqabadka guud ee hawlgalka ee qol kasta oo la heli karo wuxuu ku dhuftey $ 40.55 bishii Maajo, 319% koror isla waqtigaas sanad ka hor, laakiin 63% wuu ka hooseeyaa Maajo 2019.
Yurub Weli Way Taagan Tahay
Huteelada Yurub way ka dambeeyaan gobollo kale maadaama dalal badan ay sii wadaan shaqaalaynta xeerarka hortaagan soo noqoshada safarka. Bishii Maajo, hudheeladu waxay ururin karaan oo keliya TRevPAR oo ah $ 49.83, taas oo horseedday in la jabiyo-xitaa GOPPAR oo ah € 2.52, taas oo, inkasta oo ay aad u hooseyso, dhab ahaantii ahayd bishii ugu horreysay ee faa'iido togan ee gobolka tan iyo Sebtember 2020.
Wadarta qiimaha shaqada bishii waxay ku dhacday € 23.76, kuwaas oo 46.8% ka badnaa isla waqtigaas sanad ka hor, iyo kaliya € 6 ka yar wadarta qolalka RevPAR.
APAC Joogto ah
Aasiya-Baasifigga, safarka gudaha ee xoogan wuxuu saameyn ballaaran ku leeyahay waxqabadka hudheelka gobolka. RevPAR bishii wuxuu ku dhacay $ 59.07, taas oo 141% ka sarreysay isla waqtigaas sanad ka hor. Waxaa xoojiyay ku dhowaad 50% heerka degitaanka iyo kor u kaca ADR, oo ku dhuftay $ 118 bishii. TRevPAR ee $ 106.39 waxay ahayd wax soosaarka kororka sii socoshada dakhliga soogalootiga, maaddaama F&B RevPAR ay ku dhufteen $ 40.77 bishii Maajo, 152% ayaa ka sarreysa isla waqtigaas sanad ka hor.
Qoditaanka dakhliga ayaa ahaa kharashyada dulsaarka, taas oo, $ 30.26 qol kasta oo la heli karo, ay ahaayeen 44.9% isla waqtigaas sanad ka hor iyo $ 12 ka hooseeya bishii Maajo 2019. GOPPAR bishii waxay timid $ 27.55, oo aad u sarreysa 1,040% ayaa ka sarreysa May 2020 , laakiin wali in ka yar kalabar May 2019.
Bariga Dhexe Ayaa Sameysa Mark
Si la mid ah APAC, Bariga Dhexe waxay ku socotaa dib-u-celin fiican xagga dambe ee sicirka sare iyo degganaanshaha sii kordhaya. RevPAR bishii waxaa lagu duubay $ 76.57, 222% koror sanadkii hore, caawinta hogaaminta TRevPAR ee $ 120.88, 228% koror isla waqtigaas sanad kahor.
Dhanka kale, maaddaama kharashyada shaqadu ay yihiin kuwo deggan, kaliya xishoodka $ 40 qol kasta oo la heli karo, GOPPAR wuxuu ku dhuftey $ 37.29 bishii, 430% ayaa ka sarreysa isla waqtigaas sanad ka hor. Bariga Dhexe hadda waxay laheed 10 bilood oo xiriir ah oo waxqabad wanaagsan ah.